Ka 23, 2018 admin
Bank of America nchọpụta Kemịkalụ blockchain nche ngwá ọrụ
Bank of America meriwo a “nche na data nzuzo patent” dị ka US Patent na Trademark Office, n'ihi na a ụzọ ịchịkwa ohere akụkụ ụfọdụ nke a permissioned blockchain netwọk.
The akụ kọwara:
“A mkpa dị inye ẹkedọhọde entities / ọrụ ike ngwa ngwa mata nkanka na-mkpa ka ẹkedọhọde ọrụ’ nchegbu, na mgbe nkanka e kwuru, nche atụmatụ na obi sie na ẹkedọhọde entities / ọrụ na na-na ịnweta ngọngọ bụ, n'ezie, nyere ikike ọrụ.”
Russian State Duma anakwere kaadị ụlọ ọrụ ụgwọ
Russia si nzuko omeiwu, na State Duma, mma ọhụrụ iwu inye iwu kaadị ụlọ ọrụ. The iwu kọwaa cryptocurrencies na tokens dị ka ihe onwunwe, na dina si nkọwa maka mmekọrịta na kaadị na blockchain metụtara teknụzụ.
410 nnọchiteanya mma ụgwọ na ndị ntị, na naanị otu onye na ịtụ vootu megide ya.
The ụgwọ "On Digital Financial Àgwà" bụ nke a na-atụle ebe ikpeazụ afọ na a ikpeazụ n'obi imecha nke July 1st, amụọ na cryptocurrencies, nakwa dị ka blockchain metụtara teknụzụ dị ka smart contracts, na Ngwuputa.
CFTC mbipụta nduzi sịrị àjà cryptocurrency nkwekọrịta
The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ka a tọhapụrụ ọhụrụ nduzi mgbanwe na-eme atụmatụ depụta cryptocurrency metụtara emepụta ngwaahịa.
Ọ bụ iji nyere ahịa sonyere ịzụlite n'ihe ize ndụ management mmemme “usoro iwu n'ụzọ doro anya” on “isi ebe nke na-achọ anya karịsịa” dị ka otú ka "na-eso kwesịrị ekwesị oha Filiks na-akwanyere ndị na igba egbe nke ndị a na ngwaahịa,” dị ka DCR director Brian Bussey.
Marshall Islands rue iwu Ndinam kaadị ha mba ego
Ọhụrụ ha cryptocurrency a na-akpọ Ọkaakaa (SOV) na ga na-ebe nke USD dị ka nanị mba ego.
The ọhụrụ ego ga-abụ iwu kwadoro obi maka ulo oru na 53,000 ụmụ amaala nke Marshall Islands – a Ọkaakaa steti na UN so.
Nke a bụ nke mbụ naanị Ọkaakaa cryptocurrency banyere n'ime iwu na bụ mkpa, n'ihi na (na ozizi dịkarịa ala) ọ pụtara na ego oru dị ka mmiri na Visa ga-anabata SOV dị ka ọ bụ ugbu a iwu nro nke a Ọkaakaa mba.
The Swiss regulator mepụtara ihe ndị a chọrọ maka ICO
Na njikọ na t ...
California omeiwu ẹkenam a ọhụrụ ụgwọ na Bitcoin na Blockchain
California State iwu ...
Previous Post:Blockchain News 22.05.2018